ညီလင်းသစ်: ယူရီးယား (သို့မဟုတ်) ရင်းနှီးနေသောသူစိမ်း
Posted by ညီလင်းသစ် au 24.9.13
Nice research bro. Thumbs up
ရှာရှာဖွေဖွေ လေ့လာပြီး မျှဝေတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါဗျာ။
အင်မတန် တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပို့စ်လေးပါ ကိုညီလင်းသစ် ရေ ။
အရေးအသားကလဲ ကောင်းတော့ အစအဆုံး တောက်လျှောက်ဖတ်ဖြစ်သွားတယ် ။
အကိုရေ... အိမ်မှာရှိတဲ့ ငါးပိရေတွေကို လွှတ်လဲမပြစ်ရက်၊ စားလဲမစားရဲ ဖြစ်နေတာ။ ခုမှပဲစိတ်ချမ်းသာသွားတော့တယ်။ စေတနာတွေကို မြင်နေရတာမို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုညီရေ
Thank you for sharing your knowledge and interesting post .
Please let me share .
အချိန်ပေးသေချာရေးထားတဲ့ ကိုညီ စေတနာတွေ တွေ့နေရတယ်..။
တန်ဖိုး မဖြတ်နိုင်တဲ့ ပို့စ်လေးတပုဒ်ပါပဲ ကိုညီလင်းရေ
ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်... အစ်ကိုပြောတဲ့ စားသုံးသူအခွင့်အရေးဆိုတာကို မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သိစေချင်တယ်... မြန်မာပြည်က လူတွေအတွက် သေချာအချိန်ပေး လေ့လာပြီး ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးပို့စ်တပုဒ်ရေးတဲ့ အစ်ကိုတို့မိသားစုလဲ ကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေနော်...
ဆိုးဆေးတွေ၊ ပိုးသတ်ဆေးတွေကြားမှာ အသက်ဆက်နေရတဲ့ မြန်မာပြည်သူလူထုကို အနည်းဆုံး ငါးပိရည်လေး တစ်ခွက်တော့ စိတ်ချလက်ချ စားစေသင့်ပါတယ်၊
ကျေးဇူးကိုညီလင်းသစ် ရေ ပိုစ့် လေးအတွက် တကယ် တကယ် ကျေးဇူးတင်တယ်နော်
ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ငပိရည်လေး တောင်စိတ်ချလက်ချ စားသုံးခွင့်မရှိတဲ့ ဘ၀တွေ.. !_!
လူတိုင်းဖတ်သင့်တဲ့ ဆောင်းပါးလေးပါပဲ ကိုညီလင်းရေ ...
မသိသေးတာတွေ အများကြီး သိရလို့ ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်။
ကိုညီလင်းရဲ့ စေတနာနဲ့ အားထုတ်မှုအတွက် လေးစားစွာ ချီးကျူးပါတယ် ရှင် ... ။
အကို့ရဲ့ အချိန်ပေးမှု၊ စေတနာတွေကို လေးစားပါတယ်
အလွန်ပြည့်စုံအောင် ဖတ်လိုက်ရတယ်။ ငပိက ကြိုက်တဲ့ အစာထဲမှာ မပါသလို မိသားစုမှာ ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာထိ သူတို့စားသောက်နေကြသလဲတော့ အနေမနီးလို့ သတိမထားမိဘူး။ အိမ်ဖုံးဆက်ဖြစ်ရင်တော့ ပြန်ဖောက်သည်ချဖြစ်ဦးမှာပါ။
နှမ်းတစ်စေ့၊ ကြယ်တစ်ပွင့်၊ မှင်တစ်စက် ဆိုတဲ့အထဲမှာ type တစ်ချက် ဆိုပြီး ထပ်ဖြည့် ပါရစေအစ်ကို။ အစ်ကို့ရဲ့ စေတနာပါတဲ့ typing အချက်တိုင်းအတွက် ကျေးဇူးပါ။ ညီမလေး ဆက်ပြီး မျှဝေပေး လိုက်ပြီနော်။
A very well-written post with scientific facts andareference list
this should be published on social media to inform the public
Thanks Ko Nyi.
ပို့စ်လေးနဲ့အတူ စေတနာတွေကိုပါ တွဲလို့ ခံစားလိုက်ရတယ်အကို ... ကျေးဇူးပါအကိုရေ..
Thanks so much bro...!
ညီမ ဂျာရစ်ဒိုးကန်တင်သိန်းအေး...း)
အဟုတ်ပဲဗျာ..၊ ကျနော်တို့ လက်တစ်ကမ်းက နိုင်ငံရေးအစစ် ပါပဲ...၊
ဟုတ်..၊ ပို့စ်အရှည်ကြီးကို မပျင်းမရိ လာဖတ်တာကိုပဲ ကျနော်က ကျေးဇူးတင်လှ ပါပြီဗျာ၊း)
ညီမ Adora etc...
သတိလေးတော့ ကပ်ပြီးစားနော် ညီမ...၊းD
Thank you for taking time to read! Please, do as you wish! :)
ဟုတ်.. ကျေးဇူးပါ အစ်မရေ...၊
ကျနော်လည်း အဲဒီလိုပဲ မျှော်လင့်တာပါပဲဗျာ၊ ဆုတောင်းလေးအတွက်လည်း ကျေးဇူး ပါနော်...၊
ဟုတ်.. အစ်မ၊ မတွေ့တာကြာပြီ၊ နေကောင်းတယ်ဟုတ်...?း)
ဟုတ်တယ်ဗျာ..၊ ဘဝတွေက တကယ်ကို ဆိုးနေခဲ့တာ...၊း(
ဟုတ်.. ခက်ခဲလှတဲ့ ကွန်နက်ရှင်ကြားကနေ ကြိုးစားပြီး လာဖတ်တဲ့ မမေကိုလည်း ကျေးဇူး တင်ပါတယ်နော်..၊
အမြဲလိုလို ပုံမှန် လာဖတ်နေလို့လည်း ကျနော်က ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ..၊
ဟုတ်ကဲ့..၊ ကျေးဇူးပါ၊ အဆင်ပြေသလို ရှယ်ပါဗျာ..၊
စာလာဖတ်တဲ့ အတွက်ရော၊ အသိအမှတ်ပြု ထားခဲ့တဲ့ ကွန်မန့်အတွက်ရော.. ကျေးဇူး တင်ပါတယ်ဗျာ...၊
ဒါဆို... နှမ်းတစ်စေ့၊ ကြယ်တစ်ပွင့်၊ မှင်တစ်စက်၊ type တစ်ချက်၊ အပြင် share တစ်လက် ဆိုပြီး ထပ်ဖြည့်လိုက်ပါဦး၊း) ကျေးဇူးပါ ညီမလေး..။
Ko Pyae Phyo...
Thanksalot for your appreciation, bro!
My pleasure... Ama!
ကျေးဇူး ညီမလေး...။း)
Bravo Ko Kyi ! It is very precious post and should be published on the media. Everybody can feel your effort.
Great Post and should publish it. That's the reason why I always visit to your blog.
သိခွင့်ရတာတွေ ၊ ဖတ်ခွင့်ရတာတွေ အတွက် ... ကျေးဇူးပါ
G8 Ko Nyi. Thz........
Thanks for your valuable time and effort to share us this post.
သေးတယ်ဗျ...။ဒါပေမယ့် ဒေါက်တာကြီးက ခုလိုမျိုး
တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပိုစ့်အတွက် ကျေးဇူးအများကြီး တင်ကြောင်းပြောခဲ့ပါရစေး)
အော်... မနေ့က မောင်ဏီရဲ့ ပို့စ်မှာ ဖတ်လိုက်ရတယ်.. မောင်ညီလင်းနောက်ကို လူတွေဝိုင်းလိုက်လို့ ထွက်ပြေးရတယ်ဆိုကထဲက စိတ်ဝင်စားနေတာ.. ဒီကနေ့မှ အကြောင်းရင်း ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းသိတော့တယ် ဟာဟ..
တန်ဘိုးရှိတဲ့ပို့စ်လေးကနေ ဗဟုသုတတွေ ယူသွားပါတယ်ကွယ်... :)